ကျွန်တော့် အသံအကြောင်း | White Boy Learning Burmese
December 19, 2012 by Win Hein	10 Comments
ပထမဆုံးမှာ ပရိသတ်တွေအားလုံးကို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးပေးပါစေ။ ကျွန်တော်အတွက် မြန်မာစကားကိုလေ့လာတာ တစ်ခါတစ်လေ အရမ်းခက်တဲ့အကြောင့် ကျွန်တော်စိတ်ညစ်ပါတယ်။ :O
ဒါပေမယ့် ပရိသတ်တို့ရဲ့ အကူအပံ့အကြောင့် ကျွန်တော် ကြိုးကြိုးစားစားသင်ပါမယ်။
ထားပါတော့။ ဒီညမှာ ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကို Facebookက စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းတစ်ခု ပြတော့မယ်နော်။
ကျွန်တော်လည်း လိုက်ရှာနေတာ အကို ဝင်းဟိန်းရဲ့ အကောင့်ကို … ဗမာစကားကို ပြောတဲ့ အခါ မှာ ဘယ်လို ခံစားရလဲ … ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံခြား ဘာသာစကားကို ပြောတဲ့ အခါမှ ပီလားမပီလား စိုးရိမ်မိတယ် … ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ပီအောင်ပြောတဲ့ အတွက် … ပီတယ်လို့ ထင်မိတယ် … သူတို့ နားထဲမှာ ၀ဲနေမယ်လို့ ထင် တယ် …. ကိုဝင်းဟိန်း အနေနဲ့ ဘယ်လို ခံစားရလဲ သိချင် ခဲ့ပါတယ် … သီချင်းဆိုတာ အရမ်း ဂွမ်းတယ် …. 😛
နောက်ပြီတော့ ကျွန်တော့် တို့ပြန်ခြင်းပါ။
ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာ… ကျွန်တော် မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါ ပီရင်မပီရင် ကျွန်တော် အတွက် သိပ်မရေးကြီးပါဘူး။ ကိုယ့် အသံ ရေးကြီးတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာလိုပြောနေရင်၊ ကျွန်တော့် ဝေါဟာရ နဲ့ သဒ္ဒါ မမှန်ရင် မြန်မာလူမျိုးတွေ ကျွန်တော့်စကားတွေကို နားမလည်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်အတွက် နားလည်မှု အရေးကြီးဆုံတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဝေါဟာရအသစ် သင်ယူနေရင် မှန်တဲ့အသံထွက်ပုံ စိတ်ဝင်စားကြိုးစားပါတယ်။
ဝင်းဟိန်း မှတ်မိတာက ကျွန်တော့် ပထမ မြန်မာဘာသာအတန်းမှာ ဆရာနဲ့စကားပြောတဲ့အခါ ဆရာ “Ah! You sound likeaBurmese-Muslim!” [အား! မင်း ဗမာ-မွတ်ဆာလင်နဲ့ဝဲတဲ့]လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ့ မှန်တာပေါ့။ ဦးဆုံမှာ ဝင်းဟိန်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူငယ်ချင်းတွေ နည်းနည်းရှိတာပဲ။ နောက်ပြီတော့ သောကြာနေ့တိုင်း ဗမာ-မွတ်ဆာလင် ကလေးတွေကို အိမ်စာအကူအညီပေးဆဲတဲ့အကြောင့် သူတို့ အသံ သင်ယူထားတယ်။ အဲဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ဆရာနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော့် အသံက မြန်မာ နဲ့ ချင်း နဲ့ ပေါင်းစပ်ပါတယ်။ ဟားဟား။
နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ကျွန်တော်အသံတိုးတည်တာကြိုးစားတယ်။ YouTubeမှာ လူတွေက “သီချင်းဆိုရင် မြန်မာနဲ့ပီတယ် ဒါပေမယ့် စကားပြောရင် အသံမြန်မာနဲ့လျော့ပီပါတယ်” ဟုတ်တယ်လေ! သီချင်းတစ်ဒုပ်ကိုနားထောင်နေရင် အဆိုတော်ရဲ့ အသံမှတ်မိတယ်။ အဲဒါအကြောင့် အဲဒီအဆိုတော် (ဥပမ ဝိုင်းဝိုင်း) နဲ့ဝဲတယ်။ စကားပြောနေရင် စိတ်ထဲမှာ စကားလုံးတွေ နဲ့ သဒ္ဒါအကြောင်းစဉ်စားနေတာလို့ ကျွန်တော် အသံနဲ့ အသိတရားနည်းနည်းမရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဂျမာန်စကားလိုစကားပုံက “Ubung macht den Meister!” [လေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့် အကြီးအကဲဖြစ်နိုင်တယ်]အရမ်းမှန်ပါတယ်! ကျွန်တော် မြန်မာလို ဆက်ပြောရင် ကျွန်တော်အသံပိုကောင်းကောင်းဖြစ်ပါမယ်။
ဝင်းဟိန်းထင်တာက နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကိုလေ့လာနေရင် အသံကအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နားလည်မှုအရေးကြီးဆုံးပဲ။
10 thoughts on “ကျွန်တော့် အသံအကြောင်း”
“ပထမဆုံးမှာ ပိရိသတ်တွေအားလုံးကို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီး ဘုရား..” လို့ ရေးထားရာ ..”ပြီး” ကိုဝင်းဟိန်းရေးလိုသည်မှာ “Conjunction” – “သမ္ဗန္ဓ” အနေနှင့် သုံးလိုသည်ဖြစ်၍ “ပြီး” နေရာတွင် “ထို့ပြင်” ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
“ဒါပေမယ့် ပိရိသတ်တို့ရဲ့ အကူအပံ့အကြောင့်” ဒီနေရာတွင် “အကူအပံ့အကြောင့်” လို့ ရေးမည့်အစား “အကူအညီကြောင့်” ဟု ရေးရပါမည်။ “ကြောင့်” ၏ ရှေ့တွင် “အ” ထည့်ရန် မလိုပါ။
December 20, 2012 at 02:52
U’re so smart in writing our language!! Though U’vealittle bit errors, it’s Ok. Bravo!!
ဟုတ်တယ် ၀င်းဟိန်းသီချင်းဆိုရင် အရမ်းပီတယ်။ နောက်သတိထားမိတာ တစ်ခုရှိသေးတယ်။ ၀ိုင်ဝိုင်းသီချင်းဆိုတော့ ၀ိုင်ဝိုင်းအသံပေါက်တယ်။ နောနော်သီချင်းဆိုတော့ နောနော်အသံအတိုင်းဝဲတယ် (နောနော်က တိုင်းရင်းသားလေ) 😀 မြန်မာလိုကြိုးစားရေးထားတာကို ချီးကျူးပါတယ်။ ထွက်တဲ့ accent ကတော့ ၀င်းဟိန်းနဲ့တွေ့ပါများနဲ့ ဗမာတွေပေါ်ပဲ မူတည်မယ်။ သူတို့က ဗမာအစစ်မဟုတ်ဘူး တိုင်းရင်းသားဆို ၀င်းဟိန်းအသံလည်း ၀ဲမှာပဲ 😀
Mai Xinh Dep
December 23, 2012 at 08:54
ကိုဝင်းဟိန်း စိတ်မရှိဘူး ဆိုရင် တစ်ခုလောက် ပြင်ပေးချင်ပါတယ်။ ပိရိသတ် မဟုတ်ဘူးနော် ။ ပရိတ်သတ် ပါ။ 🙂 ယူကျူ့မှာ တင်ထားတာလဲ ကြည့်ရပါတယ်။ ကိုသာချိုဆိုတဲ့ အမေရိကန်တစ်ယောက်လဲ မြန်မာလို ပြောထားတာရှိတယ်။ သူပြောတာ တော်တော်ပီပါတယ်။ 😉
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ့အစ်မရေ။ 😀
December 23, 2012 at 08:56
မြန်မာ သီချင်းဆိုတာတော့ ကိုဝင်းဟိန်း ပထမဆုံးပဲ ထင်ပါတယ်။ 🙂
ပထမဆုံးပဲဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ကလည်း မြန်မာသီချင်းဆိုတယ်။ 🙂
မဟုတ်ဘူး ကိုဝင်းဟိန်းက မြန်မာသီချင်းဆိုပြီး ယူကျူ့မှာတင်တဲ့ ပထမဆုံး အမေရိကန် ပဲထင်တယ်လို့ပြောချင်တာ ။ 🙂
Okay, here you go. I know this was writtenawhile ago you may now know most of the corrections already. Anyway, asaMyanmar language addict, I just like to support you! Keep it up. 🙂 Below is in unicode font., let me know if you can’t read it. (Hope you will be able to read it, though.)
ကြှနျတေျာ့ အသံ”ထှကျ”အကွောငျး (အသံ means sound or voice while အသံ​ထှကျ is equivalent to pronunciation, accent is လေ​ယူ​လေ​သိမျး)
December 19, 2012 by Win Hein	|7Comments
အားလုံး​မင်ျဂလာ​ပါ။ 😀 :D:D
ပထမ​ဆုံး​မှာ ပရိသတျ​တှေ​အားလုံး​ကို အားပေး​တဲ့​အတှကျ ကြေးဇူး​အမြား​ကွီး​တငျ​ပါ​တယျ”၊” ပွီး​တော့ ဘုရားသခငျ ကောငျးခြီးပေး​ပါ​စေ။ ကြှနျတျော့​ (I’ve just put့ ) အတှကျ မွနျမာ​စကား​ကို​လေ့​လာ​တာ တဈ​ခါ​တ​လေ (correct spelling according to myanmar spelling book) အရမျး​ခကျ​တဲ့​အတှကျ​ကွောငျ့ ကြှနျတျော​စိတျညဈ​ပါ​တယျ။ :O
ဒါ​ပေ”မဲ့” ပရိသတျ​တို့​ရဲ့ အကူ​အ”ညီ”ကွောငျ့ ကြှနျတျော ကွိုး​ကွိုးစား​စား​သငျ​ပါ​မယျ။
ထား​ပါ​တော့။ ဒီ​ည​မှာ ကြှနျတျော​ခငျဗြား​တို့​ကို Facebookက အခြီ​အခြ​စကားပွော​တဲ့​ဟာ​တဈ​ခု “ရေး”/”ပွော” ပွ​တော့​မယျနျော။
ကြှနျတျော​လညျး လိုကျ​ရှာ​နေ​တာ အကို ဝငျး​ဟိနျး​ရဲ့ အကောငျ့​ကို … ဗမာ​စကား​ကို ပွော​တဲ့ အခါ မှာ ဘယျ​လို ခံစား​ရ​လဲ … ကြှနျတျော​တို့ နိုငျငံ​ခွား ဘာသာ​စကား​ကို ပွော​တဲ့ အခါ​မှ ပီလား​မ​ပီလား စိုးရိမျ​မိ​တယျ … ဒါ​ပေ​မယျ့ စိတျ​ထဲ​မှာ​တော့ အတတျ​နိုငျ​ဆုံး ပီ​အောငျ​ပွော​တဲ့ အတှကျ … ပီ​တယျ​လို့ ထငျ​မိ​တယျ … သူ​တို့ နား​ထဲ​မှာ ဝဲ​နေ​မယျ​လို့ ထငျ တယျ …. ကို​ဝငျး​ဟိနျး အနေ​နဲ့ ဘယျ​လို ခံစား​ရ​လဲ သိ​ခငျြ ခဲ့​ပါ​တယျ … သီခငျြးဆို​တာ အရမျး ဂွမျး​တယျ …. 😛
နောကျ​ပွီ​တော့ ကြှနျတေျာ့ “တုံ့”ပွနျ​ခွငျး​ပါ။
ဘယျ​လို​ခံစား​ရ​လဲဆို​တာ… ကြှနျတျော မွနျမာ​လို​ပွော​တဲ့​အခါ “ပီ​တာ​မ​ပီ​တာ​က” ကြှနျတျော အတှကျ သိပျ​မ​ရေး​ကွီး​ပါ​ဘူး။ ကိုယျ့ အသံ”ထှကျ” ရေး​ကွီး​တာ​ပေါ့နျော။ ဒါ​ပေ”မဲ့” မွနျမာ​လို​ပွော​နေ​ရငျ၊ ကြှနျတေျာ့ ဝေါဟာရ နဲ့ သဒ်ဒါ မ​မှနျ​ရငျ မွနျမာ​လူ​မြိုး​တှေ ကြှနျတေျာ့​စကား​တှေ​ကို နား​မ​လညျ​တော့​ဘူး။ ကြှနျတျော​အတှကျ နားလညျ​မှု”က” အရေး”အကွီး​ဆုံး”အရာ​ဖွဈ​ပါ​တယျ။ ဒါ​ပေ”မဲ့” ကြှနျတျော ဝေါဟာရ​အသဈ သငျ​ယူ​ရငျ မှနျ​တဲ့​အသံ​ထှကျ”နိုငျ​အောငျ” (or အသံ​ထှကျ​မှနျ​အောငျ) စိတျ​ဝငျ”တ”စား ကွိုးစား​ပါ​တယျ။
ဝငျး​ဟိနျး မှတျမိ​တာ​က ကြှနျတေျာ့ ပထမ မွနျမာဘာသာ​အတနျး​မှာ ဆရာ​နဲ့​စကားပွော​တဲ့​အခါ ဆရာ​က “Ah! You sound likeaBurmese-Muslim!” [အား! မငျး ဗမာ-မှတျ​ဆ”လငျ​အသံ”ဝဲ”တယျ”]လို့​ပွော​ခဲ့​ပါ​တယျ။ အဲ​ဒါ မှနျ​တာ​ပေါ့။ ပထမ​တုနျး​က (or အရငျ​တုနျး​က) ဝငျး​ဟိနျး​မှာ ဗုဒ်ဓ​ဘာသာ​ဝငျ သူငယျခငျြး​တှေ နညျး​နညျး”ပဲ”ရှိ​တာ​ပဲ။ နောကျ”ပွီး”တော့ သောကွာနေ့​တိုငျး ဗမာ-မှတျ​ဆ​လငျ ကလေး​တှေ​ကို အိမျ​စာ​အကူအညီ​ပေး​တဲ့​အ”တှကျ”ကွောငျ့ (or for smoother tone, အိမျ​စာ​ကူ​ရှငျး​ပေး​လို့) သူ​တို့ အသံ​ထှကျ​ကို သငျ​ယူထား​တယျ။ အဲ ဒါ​ပေ”မဲ့” ကြှနျတေျာ့ ဆရာ​နားလညျ​ခဲ့​ပါ​တယျ။ အခု​တော့ ကြှနျတေျာ့ အသံ​က မွနျမာ နဲ့ ခငျြး နဲ့ ပေါငျး”ထား”ပါ​တယျ (စပျ is correct but we don’t use it in speaking Burmese)။ ဟား​ဟား။
နေ့​တိုငျး​နေ့​တိုငျး ကြှနျတျော​အသံ​တိုး​တညျ”အောငျ”ကွိုးစား​တယျ။ YouTubeမှာ လူ​တှေ​က “သီခငျြးဆို​ရငျ မွနျမာ”သံ”ပီ​တယျ (or မွနျမာ​နဲ့​တူ​တယျ) ဒါ​ပေ”မဲ့” စကားပွော​ရငျ အသံ”ထှကျ​က” “မွနျမာ​သံ သိပျ​မ​ပီ​ဘူး”” ဟုတျ​တယျ​လေ! သီခငျြး​တဈ”ပုဒျ”ကို နားထောငျ​နေ​ရငျ အဆိုတျော​ရဲ့ အသံ​မှတျမိ​တယျ။ အဲ​ဒါ​ကွောငျ့ အဲ​ဒီ​အဆိုတျော (ဥ​ပ”မာ” ဝိုငျး​ဝိုငျး)”အသံ​အတိုငျး”ဝဲ​တယျ။ စကားပွော​နေ​ရငျ စိတျ​ထဲ​မှာ စကားလုံး​တှေ နဲ့ သဒ်ဒါ​အကွောငျး​စဉျ​စား​နေ”လို့” ကြှနျတျော အသံ”ကို သိပျ​အာရုံ​မ​စိုကျ​နိုငျ​ဘူး”။
ဒါ​ပေ”မဲ့” “ဂြာမနျ​စကားပုံ”က “Ubung macht den Meister!” [လကေ့ငျြ့​ခွငျး​ကွောငျ့ အကွီးအကဲ​ဖွဈ​နိုငျ​တယျ]”လို့​ပွော​တယျ” အရမျး​မှနျ​ပါ​တယျ! ကြှနျတျော မွနျမာ​လို ဆကျ​ပွော​ရငျ ကြှနျတျော​အသံ”ထှကျ ပို​ကောငျး​လာ​ပါ​လိမျ့​မယျ”။
ဝငျး​ဟိနျး​ထငျ​တာ​က နိုငျငံ​ခွား​ဘာသာ​စကား​ကို​လေ့​လာ​နေ​ရငျ အသံ”ထှကျ”က​အရေးကွီး​ပါ​တယျ။ ဒါ​ပေ​မယျ့ နားလညျ​မှု​က အရေး​အကွီး​ဆုံး​ပဲ။
ကျွန်မလည်း အင်္ဂလ်ိပ်စာ/စကား သင်ရတာအရမ်းစိတ်ညစ်တယ်။အသံထွက်ကတစ်မျိုး၊ သဒ္ဒါက တစ်ဖုံ၊ နောက်ပြီး ဟိုက ဒီက ယူထားတဲ့ ဝေါဟာရတွေက တစ်သွယ်…လွယ်ဘူး။ ဒီကြားထဲ မပြောတတ်ရင် အဟားခံရတတ်သေးတယ်။